ကြှနျတျောက မခဈြရပဲနဲ့လညျး နနေိုငျတယျဆိုတဲ့ လူစားတဈမြိုးပါပဲ.. - ONE DAILY MEDIA
ကြှနျတျောက မခဈြရပဲနဲ့လညျး နနေိုငျတယျဆိုတဲ့ လူစားတဈမြိုးပါပဲ။ မခဈြတတျတာ မဟုတျဘူးနျော။ ခဈြတတျတယျ ။ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုလညျး အယုံကွညျရှိတယျ ။ ဒါပမေဲ့ တဈစုံတဈယောကျကို မခဈြရလညျးဖွဈတယျ ၊ ကြှနျတေျာ့အတှကျ အခဈြမခံရလညျး ရတယျဆိုတာမြိုး။
ရညျးစားမရှိလို့ တဈယောကျထဲ နနေရေလညျး အဆငျပွနေတောပဲ။ အထီးကနျြ lonely ဖွဈတယျလို့ မခံစားမိပွနျဘူး။ အခဈြမရှိရငျ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျဖွဈတတျတဲ့ type က ကြှနျတျော မဟုတျခဲ့ဘူး။ ရညျးစားရှိတဲ့ သူတှေ romatic ဆနျတဲ့အခြိနျလေးတှကေို သဘောကမြိတယျ ။ အားကမြိတယျ ။ ဒါပမေဲ့ ခဏလေးပဲ။ ပွီးရငျ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျ အသားကသြှားရော။
ခဈြခဲ့ဖူးတယျ ။ ရညျးစားထားခဲ့ဖူးတယျ ။ but အရမျးကွီး serious မဖွဈခဲ့ဖူးဘူး။ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ ကိုယျ အဆငျပွနေတောပါပဲ။ အသကျတှေ ကွီးလာလညျးအရမျးကွီး ခဈြသူ ရညျးစားကို တောငျ့တမိနတောမြိုး မဟုတျပွနျဘူး။ ဘဝမှာ တဈခါလောကျတော့ ခဈြဖူးကွညျ့ခငျြတဲ့ စိတျရှိတယျ ။ but ရူးရူးမူးမူးကွီးတော့ မဖွဈသေးဘူး ။ ရူးရူးမူးမူး ဖွဈရမဲ့သူ မတှသေ့ေးလို့လညျး ဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျမှာပေါ့။
ဒါဆို မေးနိုငျစရာ တဈခုရှိမယျ ။ မငျးက အခဈြမရှိပဲ နနေိုငျသှားပွီးလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုး။ ဟငျ့အငျး .မနနေိုငျပါဘူး။ ကြှနျတျောလညျး ဘဝမှာ လူတဈယောကျကို နကျနကျနဲနဲ နဲ့ တဈသကျလုံး ခဈြသှားကွညျ့အုံးမှာ ။ ကြှနျတေိာ မွတျနိုးရတဲ့လူတှလေ့ာရငျ အစှမျးကုနျခဈြပေးမှာ။ But. . . အခုတော့ ရညျးစားမရရငျ မဖွဈပါဘူးဆိုတဲ့ထဲမှာ ကြှနျတျော မပါသေးပါဘူး။ တဈယောကျထဲ နနေရေလညျး သဘောကပြါတယျ ။
ကျွန်တော်က မချစ်ရပဲနဲ့လည်း နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လူစားတစ်မျိုးပါပဲ..
ကျွန်တော်က မချစ်ရပဲနဲ့လည်း နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လူစားတစ်မျိုးပါပဲ။ မချစ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ချစ်တတ်တယ် ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း အယုံကြည်ရှိတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မချစ်ရလည်းဖြစ်တယ် ၊ ကျွန်တော့်အတွက် အချစ်မခံရလည်း ရတယ်ဆိုတာမျိုး။
ရည်းစားမရှိလို့ တစ်ယောက်ထဲ နေနေရလည်း အဆင်ပြေနေတာပဲ။ အထီးကျန် lonely ဖြစ်တယ်လို့ မခံစားမိပြန်ဘူး။ အချစ်မရှိရင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တတ်တဲ့ type က ကျွန်တော် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ရည်းစားရှိတဲ့ သူတွေ romatic ဆန်တဲ့အချိန်လေးတွေကို သဘောကျမိတယ် ။ အားကျမိတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ခဏလေးပဲ။ ပြီးရင် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် အသားကျသွားရော။
ချစ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ရည်းစားထားခဲ့ဖူးတယ် ။ but အရမ်းကြီး serious မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ် အဆင်ပြေနေတာပါပဲ။ အသက်တွေ ကြီးလာလည်းအရမ်းကြီး ချစ်သူ ရည်းစားကို တောင့်တမိနေတာမျိုး မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဘဝမှာ တစ်ခါလောက်တော့ ချစ်ဖူးကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ် ။ but ရူးရူးမူးမူးကြီးတော့ မဖြစ်သေးဘူး ။ ရူးရူးမူးမူး ဖြစ်ရမဲ့သူ မတွေ့သေးလို့လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။
ဒါဆို မေးနိုင်စရာ တစ်ခုရှိမယ် ။ မင်းက အချစ်မရှိပဲ နေနိုင်သွားပြီးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး။ ဟင့်အင်း .မနေနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဘဝမှာ လူတစ်ယောက်ကို နက်နက်နဲနဲ နဲ့ တစ်သက်လုံး ချစ်သွားကြည့်အုံးမှာ ။ ကျွန်တေိာ မြတ်နိုးရတဲ့လူတွေ့လာရင် အစွမ်းကုန်ချစ်ပေးမှာ။ But. . . အခုတော့ ရည်းစားမရရင် မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော် မပါသေးပါဘူး။ တစ်ယောက်ထဲ နေနေရလည်း သဘောကျပါတယ် ။